Mid autum mazuva kwaziso uye cherechedzai kubva Axnew
Dear All, Please nomutsa kuziviswa kuti Axnew Display muna China nokuda Mid-Autumn Festival ari wa15 (Thursday) kuti rechi18 (Svondo), Sep, 2016. Ndapota ndibatsirei kutaura mashoko aya kune tsvimbo yedu, vatengi, bhizimisi uye zvimwe akakodzera mapato kana kunodiwa. IT, Operation, Finance nezvimwe depar ...
Axnew anonyaradza projected capacitive ikabatwa monitors kubva 7 padiki kusvika 32 padiki
Axnew inopa inosiyana pamusoro projected capacitive kubata monitors kubva 7 padiki, 8 padiki, 8.4 padiki, 10 padiki, 10.4 padiki, kumusoro TP 21.5 padiki, 32 padiki, etc. Just chivhariso pamwe USB inowanikwa, uye kushanda nayo takasununguka. Maererano vatengi 'zvikumbiro, injiniya chikwata chedu kwakasimbiswa zvakasiyana Ukobvu ...
Industrial ikabatwa emadziro hrs
With mashandiro laptop riri nani uye nani, minda yakawanda maindasitiri makatanga kushandisa isingadhuri emadziro hrs, uye mumaindasitiri musabata emadziro hrs musika rave ndavhiyiwa chaizvo kuchinja, vanhu vakatanga vanowanzopedzisira enzanisa zvisikwa dzevanhu kubatwa-screen Hwendefa kombiyuta. Naizvozvo ...
The Development kuti projective-capacitive sikirini
Nengano popularization ari kuitika, kuti projective capacitive chidzitiro kwazova inonyanya kufarirwa ikabatwa sefa uye zvishoma nezvishoma kutsiva resistive chidzitiro sezvo mutengi wokutanga sarudzo. Zvakanakira capacitive chidzitiro: 1. haakurumidzi kukanganiswa midziyo inopinza scratching uye akapfeka 2 ....
New Website maindasitiri monitors kuti AXNEW kambani
Yakatangwa mugore ra2009, Axnew vakabudirira yakasimbiswa kwenguva ukama nemakasitoma iyi maindasitiri kuratidzwa mutsetse pasi pose. Kutenda, redu rokutanga Website axnew.com vari zvakanaka unozivikanwa tichikurukura vatengi. Zvino boka redu inotanga Website yedu wechipiri: https: // maindasitiri-lcdmonitor ...
Dear Madzishe kana madam, Please kuziviswa kuti fekitari yedu kuenda kutamira chivako chitsva muna Industrial paka uye pashure Jan 1, 2015. New kero iri sezvo pazasi: 4th Floor, Yinliantong Industrial Park, NO.460 AilianZhangbei, Longgang District , ShenzhenChina. Phone nhamba, Fax nhamba uye E-mai ...
VaIri Touch vachishanda uye kukura
Michini kubata chidzitiro yakatanga hunyambiri uye multi-kubata zvinhu rakakura hukuru ako kuratidza chidzitiro. Ngatizive zvakawanda pamusoro vaIri kubatwa musimboti chokutanga. Michini Touch Chinovhara chinhu akagunzva puranga riri kazhinji kuiswa pamberi kuratidza chidzitiro. The furemu iri revatema pamwe circui akadhindwa ...
AXNEW kuratidza maindasitiri Monitor
AXNEW kuratidza akaudzawo nemi chinhu pamusoro maindasitiri Monitor. How kusarudza imwe maindasitiri Monitor? Industrial LCD monitors uyewo vachaparadzanisa chinangwa chakafanana LCD monitors kuti Laptops. Zvisinei, mumwe wechokwadi maindasitiri tarisisa: kuchatanga uye kumhanya noutsinye kushanda runyararo, vachange ishande zvikuru ...
8.0 "akazaruka puranga kuongorora 800 × 600 sekubata mikana
AXNEW Chinosimudzira-maonero kuenzana anoratidza 8.0''800 × 600 (4: 3) pamanyorerwo uye ngatiremekedzei iwe kana uri kurifarira. 8.0 '' akatungamirira backlight pamwe nemamwe akaitwa kubva mainjiniya edu uye kuudza vamwe mashoko nemi. Iyi yakakurumbira chigadzirwa chinayo ari utsanzi yedu VGA inowanikwa ...
Chiedza chezuva verengeka kubata chinovhara tarisisa 7 padiki uye 8 padiki pamwe yakazaruka puranga mhinduro
by pamusoro 18-11-22
Chiedza chezuva verengeka kubata chinovhara tarisisa 7 padiki uye 8 padiki pamwe yakazaruka puranga mhinduro dziri abuda, chikwata chedu kwakasimbiswa siyana Specification anoenderana voltages siyana, kusanganisira 5V uye 12V. zvingaitwa izvi zvinogona kuva Semi panze mafomu, akadai yokupakira hurongwa, vend ...
Flat ramangwana magadzirirwo sekubata Panel yori
Axnew anokurudzira flat magadzirirwo kwechokwadi 21 padiki capacitive kubata Panel yori, pamwe zvizere HD 1920 × 1080. mamwe hukuru 13 padiki uye 15.6 padiki venguva HD IPS nokurondedzerwa vobuda mu mishoma yakatevera. Welcome kutaura nesu kana une zvokubvunza.